अनौठो बच्चा : चार खुट्टा र दुईवटा यौनांग, गरियो सफल शल्यक्रिया - Kantipath.com
सिएनएन– भारतको कर्नाटकमा केही महिनाअघि एउटा अनौठो बच्चा जन्मिएको थियो। जसको चार खुट्टा र दुईवटा यौनांग थिए। तर, यसै साता ती बच्चाको सफल शल्यक्रिया भएको छ। अब उनी सामान्य बनेका छन्। चिकित्सकलले शलयक्रिया गरी दुई खुट्टा र एक यौनांग हटाएपछि ती बालक सामान्य बनेका हुन । बच्चाको नाम सार्बजनिक गरिएको छैन।
बैंगलोरको नारायण हेल्थ सिटीका चिकित्सकले ती बालकको सफल शल्यक्रिया गरेका हुन्। शल्यक्रियामा चिकित्सक, नर्स र प्राविधिक गरी २० जनाको समूह संलग्न थियो। बच्चालाई दुर्लव वशांणुगत समस्या पोलिमेलिया भएको चिकित्सकले बताएका छन्। पोलिमेलियाका कारण जन्मदै शिशुको शरीरमा दुईभन्दा बढी हात खुट्टा हुने गर्छन्।
ती अनौठो बच्चालाई हेर्न स्थानीय मानिसको भीड नै लागेको थियो। बालककी आमा ललितम्मा र पिता चेनावस्वाले छोरोलाई दैवी शक्तिका रुपमा लिएका थिए।
जर्नल अफ क्लिनिकल इमेजिङ साइन्समा उल्लेख भए अनुसार असामान्य क्रोमोजोम वा वातावरणीय तत्व पनि पोलिमेलिया हुने गर्छ। अहिलेसम्म पोलिमेलियाबाट भारतमा जन्मिने बच्चाको संख्या यकिन छैन। सन् २००८ मा विहारमा एक बालिकाको जन्मदै चार हात र खुट्टा थिए।
प्रकासित मिति : २०७३ फागुन २ गते
Previous Previous post: सलमान खान भनेपछि हुरुक्कै हुन्छिन संसारकै सबैभन्दा मोटी महिला…
Next Next post: ऋण गरेर स्थानीयले गरे सडक निर्माण
माधव पक्षका नेताले गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडाबाट चुनाब लड्ने
कोरोना संक्रमितले आइसोलेसनमा सास फेर्न गाह्रो भए के गर्ने ? डा.रबिन्द्र पाण्डेका १६ सुझाव
आज २०३ औँ मार्क्स जयन्ती : यस्तो छ जीवनी
कृपाश्वरको परिवार एमालेमा प्रवेश गरेको निराधार हल्ला मात्रै
गण्डकीमा ३ सांसदलाई कोरोना : भोट हाल्न पाउने
गुलाबी रंगको पानीले भरिएको अनौठो ताल
पुरुष ट्याक्सी चालकको बलात्कार गर्ने युवती !
लिंग नट खोल्न प्रयोग गरिने रेन्चमा अड्किँदा….
अन्तिम संस्कारको कर्मकाण्ड गर्ने रोबोट
पहिलो पटक यौन सम्पर्कमा युवतीले यी दश कुरा चाहान्छन् !
महोत्तरीको एउटा बस्तीमा ४० जनामा कोरोना संक्रमण
कोरोना संक्रमणबाट काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधिशको निधन
आज राति ९ बजेसम्म बहुमत जुटाउन नसके ओली नै प्रधानमन्त्री !
कोरोना संक्रमितलाई २ हजार पोषण खर्च ८ हजार एम्बुलेन्स भाडा दिने नगरपालिकाको घोषणा
चौलागाईंको सम्मानमा देशभरका पार्टी कार्यालयले ३ दिन झन्डा आधा झुकाउने